मैदानमा रोएका नेइमारलाई के भनेर आल्भेसले फकाए?
मैदानमा रोएका नेइमारलाई के भनेर आल्भेसले फकाए?
युभेन्ट्सका डिफेन्डर डानी आल्भेसले आफ्नो क्लबबाट पराजय भोगेर मैदानमै आँशु झारेका बार्सिलोनाका ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेइमारलाई आफूले के भनेर फकाएको? यसको खुलासा गरेका छन्।
च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत घरेलु क्याम्प नोउमा युभेन्ट्सविरुद्ध गोलरहित बराबरी खेलेपछि विहिबार बिहान बार्सिलोना समग्रमा ३–० ले पछि पर्दै क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिएको थियो। क्याम्प नोउको दोस्रो लेगमा कुनै नतिजा ननिस्किए पनि टुरिनमा एक साताअघि भएको पहिलो लेगको खेलमा बार्सिलोना ३–० ले पराजित भएको थियो।
खेलको नतिजा निस्किने वित्तिकै नेइमारले मैदानमा आफ्नो आँशु रोक्न सकेका थिएनन्। उनलाई बार्सिलोनाका पूर्व डिफेन्डरसमेत रहेका आल्भेस र हुँवा कुआड्राडोले सम्झाएका थिए। त्यतिबेला नेइमार आल्भेसको काँधमा टाउको निहुँर्याएर रुएको तस्बिर विभिन्न विदेशी मिडियाको प्रमुख समाचार बनेको थियो।
आल्भेसले जित र हार खेलको सामान्य नियम भएको भन्दै नेइमारले आफूलाई अंकमाल गरेर रुनु आफ्नो खेल जीवनको महत्वपूर्ण अनुभव रहेको बताए।
उनले भने, ‘मैले उनलाई सम्झाएँ, यसलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छँ। हामीहरु एकआपसमा भिड्नु नै संयोग थियोँ।’
उनले नेइमार मैदानमा रुनुलाई उनको भावना यस खेलसँग जोडिएको अनुभव आफूले गरेको बताए। त्यही अभिव्यक्त मैदानमा पोखिएको आल्भेसले बताउन भुलेनन्। ३३ वर्षीय आल्भेसले पछि नेइमारले आफूलाइ अंकमाल गर्दै गरेको फोटो सोशल मिडियामा पोस्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘म तिमीलाई माया गर्छु भाइ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, बैशाख ७, २०७४ २१:१०:००